Keylogger Waa maxay?, Qalab ama Software xaasidnimo ah
Inicio/Hacking/Keylogger Waa maxay?, Qalab ama Software xaasidnimo ah
HackingTalo soo jeedinTiknoolaji
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Keyloggers
0 591 6 daqiiqo akhri
1 Waa maxay Keylogger?
2 Goorma ayuu Keylogger kii ugu horreeyey soo muuqday?
3 Sidee waxyeello u yeelan kartaa?
4 Sidee loo abuuraa Keylogger?
5 Muxuu dhab ahaan keydiyaa Keylogger?
5.1 Ma sharci darro baa in la isticmaalo Keylogger?
5.2 Sidee Keylogger loogu beeray?
5.3 Sidee Trojan u faafaa?
5.4 Sideen u masaxaa Keylogger?
5.5 Waan jeclahay tan:
Waa maxay Keylogger?
Si loo cadeeyo inay tahay Keylogger waxaan si fudud u dhihi karnaa waa nooc ka mid ah softiweerka ama qalabka qalabkae kaas oo loo adeegsado duubista iyo keydinta waxyaabaha muhiimka ah, waxaa sidoo kale loo yaqaan Jaridda Keystroke Fariintani waxay keydineysaa wax kasta oo isticmaalehu ku qoro kombiyuutarka ama taleefanka gacanta.
In kasta oo ay caan ku tahay keylogger inuu keydiyo keystrok, haddana sidoo kale qaar baa awood u leh qaadista shaashadaha ama sameynta dabagal dheeraad ah. Waxay kuxirantahay keylogger-ka, hawsha diiwaangashan waxaa lagala tashan karaa isla kombiyuutarka ama mid kale, sidaasna lagu xakamaynayo wax kasta oo la qabtay. Waxa kale oo jira shirkado u heellan inay bixiyaan noocan ah khayaanada waxayna kuu oggolaanayaan inaad si fog uga dhex aragto guddigooda koontaroolka qalab kasta.
Caadi ahaan Keylogger waa basaas loo adeegsado danbiyo, si ay u qabtaan macluumaadka qarsoodiga ah ee isticmaalayaasha iyaga oo aan ogolaansho ama ogolaansho ka haysan. Waxaa loogu talagalay inay qarsoodi ahaadaan oo aan la ogaan. Taasi waa sababta ay dhif u tahay in la ogaado, maxaa yeelay hawlgal ahaan waxyeello uma leh qalabka; hoos uma dhigto, mana qabsato boosas fara badan mana faragelinayso howlaha caadiga ah ee nidaamka qalliinka.
Goorma ayuu Keylogger kii ugu horreeyey soo muuqday?
Ku dhowaad waxba lagama oga taariikhdeeda, waxaa la rumeysan yahay inay ahayd Ruushka intii lagu jiray dagaalkii qabow ee abuuray qalabkan. Qaar kale waxay ku andacoodaan in markii hore loo isticmaalay in lagu dhaco bangiga, oo leh fayras loo yaqaan 'Backdoor Coreflood'.
Sannadkii 2005, ganacsade reer Florida ah ayaa dacweeyay Bank of America ka dib markii ay ka xadeen $ 90.000 akoonkiisa bangiga. Baadhitaanka ayaa lagu ogaaday in kombuyuutarka ganacsadaha uu ku dhacay fayraska aan soo sheegnay ee Backdoor Coreflood. Sababtoo ah waxaad ku qabatay macaamiladaada bangiyada internetka, dambiilayaasha internetka waxay heleen dhammaan macluumaadkaaga sirta ah.
Sidee waxyeello u yeelan kartaa?
Dhaawac culus, gaar ahaan haddii aadan ogeyn inaad Keylogger ku rakibtay kumbuyuutarkaaga. Haddii aadan ogayn in kumbuyuutarkaagu duubayo wax kasta oo aad qorto, waxaad soo bandhigi kartaa furaha sirta ah, lambarrada kaararka deynta, xisaabaadka bangiga, iyo xitaa noloshaada gaarka ah waxay geli kartaa khatar.
In kasta oo ay run tahay inay jiraan barnaamijyo noocan oo kale ah oo loogu talagalay adeegsiga sharciga, markii loo adeegsado ujeedooyin dambiyeed, waxaa loo tixgeliyaa nooc ka mid ah noocyada khayaanada nooca basaasnimada ah. Kuwani waxay isu beddeleen waqti ka dib; Mar dambe kaliya ma leh shaqadeeda aasaasiga ah ee keystroke, laakiin sidoo kale waxay qaadataa shaashadda; wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaabeyso isticmaaleha la kormeerayo haddii ay dhacdo in kombiyuutarku leeyahay dhowr ka mid ah; Waxay haysaa liistada dhammaan barnaamijyada la fuliyay, dhammaan nuqul-dhejiska ka soo baxa boodhka, bogagga internetka ee la booqday taariikhda iyo waqtiga, waa loo qaabeyn karaa inay u dirto dhammaan faylashaas emayl.
Sidee loo abuuraa Keylogger?
Abuuritaanka keylogger waa ka fudud yahay sida ay u muuqato, waxaad abuuri kartaa mid fudud xitaa adigoon aqoon yar u lahayn barnaamijyada. Xusuusnow inaadan u adeegsan ulajeedooyin xaasidnimo leh, maxaa yeelay waxaad galaysaa dambi culus oo kuu sababi kara dhibaatooyin xagga sharciga ah, laakiin waxaan mar hore uga hadalnay tan maqaal kale. Waxaan barnaa sida loo abuuro keylogger maxalli ah 3 daqiiqo gudahood si loo tijaabiyo habkan hacking aad loo yaqaan. Haddii aad tahay nooca dadka xiisaha leh, oo aad rabto inaad ku qanciso aqoontaada aqooneed ee ku saabsan amniga kumbuyuutarka, hubi casharka soo socda:
Muxuu dhab ahaan keydiyaa Keylogger?
Shaqadiisa si weyn ayaa loo ballaariyay, ilaa heer laga duubo in la duubo wicitaanada, la xakameeyo kaamerada lana shaqeeyo makarafoonka gacanta. Waxaa jira 2 nooc oo Keylogger ah:
Heerka software-ka, tan waxaa lagu rakibay aaladda waxaana loo qaybiyaa saddex qaybood oo hoose:
Yarka: Waxay ku nooshahay xudunta kombuyuutarkaaga, oo lagu yaqaan magaca Kernel, oo ku dhex qarsoon nidaamka hawlgalka, taasoo ka dhigaysa wax aan macquul ahayn in la ogaado. Hormarinteeda ayaa sida caadiga ah ka dhigaysa a hackkhabiir khabiir ku ah berrinka, sidaa darteed iyagu ma aha kuwo aad u badan.
API: Waxay ka faa'iideysaneysaa howlaha Windows API si loo badbaadiyo dhammaan cinwaannada muhiimka ah ee isticmaaleha uu ku sameeyay feyl gooni ah. Faylashaasi badanaa waa kuwo aad u fudud in la soo kabsado, maadaama ay badiyaa ku jiraan warqad xusuus qor ah.
Cirbadda xusuusta: Keyloggers-yadaani waxay bedelaan miisaska xusuusta, iyagoo isbedelkan ku sameynaya barnaamijku wuxuu iska ilaalin karaa koontaroolka koontada Windows.
Keylogger heerka qalabka, uma baahna inay ku rakibaan wax software ah nidaamka qalliinka si ay u shaqeeyaan. Kuwani waa qaybaha hoose:
Ku saleysan Firmware: Qori-xajiyuhu wuxuu kaydiyaa guji kasta oo kombiyuutarka ah, hase yeeshe, dambiile-yaasha waa inay marin u helaan kombuyuutarka si ay ula soo baxaan macluumaadka.
Qalabka kumbuyuutarka: Si loo duubo dhacdooyinka, waxay ku xirmaysaa kumbuyuutarka iyo xoogaa dekedda wax laga soo geliyo kombiyuutarka. Waxaa lagu yaqaan magaca 'KeyGrabber', waxaa laga heli doonaa si sax ah dekedda ama USB ama PS2 ee qalabka soo gelinta.
Uumeeyeyaasha Keyboard wireless: Waxaa loo adeegsadaa jiirka iyo teebabka wireless-ka, labadaba waxay u gudbiyaan dhammaan macluumaadka la riixay oo la soo guuriyay; guud ahaan macluumaadkaan oo dhan waa la duubay, laakiin isagu wuu awoodaa inuu qariyo.
Ma sharci darro baa in la isticmaalo Keylogger?
Waxaa jira dalal qaar oo ay sharci tahay in la isticmaalo keylogger ama codsi xakameyn waalidnimo si loola socdo dhaqdhaqaaqa carruurtaada kombuyuutarka, illaa iyo inta ay ujeedadu tahay ilaalinta nabadgelyadooda internetka iyo haddii ay yihiin kuwo aan qaan gaarin in la bixiyo ogolaansho. Haddii ay da'dooda gaaraan, waa inay bixiyaan oggolaansho.
Tusaale ahaan. Gudaha Isbaanishka, marka laga hadlayo ogolaansho la'aanta ku soo xadgudubka asturnaanta qofka, waxay sharci ahaan laheyd in la jebiyo asturnaanta haddii:
Waxaad leedahay lambarrada marin-u-helka ee koontada ilmahaaga adigoon u baahnayn inaad adeegsato qaabab soo galitaan. hacking.
Waxaad ka shakisan tahay in ilmahaagu yahay dhibbane dambi.
Waxay kaloo sharci noqon kartaa in la adeegsado keylogger si loola socdo shaqada shaqaalaha shirkadda inta ay ka warqabaan. Sharci ahaanshaha keyloggers waa su'aal badan waxayna ku xirnaan doontaa waddan kasta, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad nafsaddaada wax uga sheegto.
Waxaan kaaga tageynaa xiriirka tooska ah ee qeexitaanka Spain iyo Mexico.
Dhinaca kale, Keylogger wuxuu waligiis sharci darro noqonayaa marka loo adeegsado falal dambiyeed sida xatooyada furaha sirta ah iyo macluumaadka sirta ah.
Sidee Keylogger loogu beeray?
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala ayaa waxaa saameeya Keylogger siyaabo kala duwan, kan ugu caansan emaylka (emaylka phishing) leh shay ku lifaaqan oo ay ku jirto hanjabaadu. Keylogger wuxuu ku jiri karaa aaladda USB-ga, degel websaydh ah, iyo kuwo kale.
Haddii aad hesho kaarka Kirismaska ​​ee "Ciidaha Farxadda leh", iska dhegayso, waa "Trojan" iyo waxa aad u badan tahay inaad heli doontid waa "furin farxad leh" maaddaama dambiilayaasha internetka ay ka faa'iideystaan ​​xilliga Kirismaska ​​si ay u gudbiyaan fayrasyada, khiyaanooyinka iyo barnaamijyada xun. Ka dib markaad gujiso xiriiriyaha ama aad furto lifaaq, u oggolow Keylogger in lagu rakibo kombuyuutarkaaga ama aaladdaada moobaylka, adoo siinaya helitaanka macluumaadkaaga gaarka ah. Xaqiiqdu waxay tahay hackWaxaad khibrad weyn u leedahay noocan ah furin awoodaan iska dhig keylogger-ka sida haddii ay ahaan lahayd PDF, Ereyga iyo xitaa JPG ama qaabab kale oo aad loo isticmaalo. Sababtaas awgeed, waxaan xoogga saareynaa taas ha furin waxyaabaha aadan codsan.
Waa in la ogaadaa in, haddii kombiyuutarkaagu ku jiro shabakad wadaag ah, waa sahlan tahay marin u hel oo ku faafin. Waa inaadan galin macluumaadka qarsoodiga ah, xisaabaadka bangiga iyo kaararka deynta qalabka noocaan ah.
Sidee Trojan u faafaa?
Qaabka ugu badan ee faafintu waa internetka, waxay adeegsadaan qalab aad u soo jiidasho badan si ay kuugu dhiirrigeliso inaad u soo dejiso fayraska xun ee ujeeddooyinkooda dambiyeed. Waa kuwan 4-ta Trojans ee ugu caansan:
Soo dejiso faylal dillaacay, Soo degsashada barnaamijyada sharci darrada ah waxaa ku jiri kara hanjabaad qarsoon.
Software bilaash ahFadlan ha soo deyin codsiyada bilaashka ah ka hor inta aanad xaqiijin in degelku aamin yahay, soo degsadyadan waxay u taagan yihiin khatar weyn
Phishing, Tani waa qaabka ugu caansan ee weerar Trojan ah oo lagu qaado qalabka aaladda emaylka, kuwa wax weerara waxay abuuraan xirmooyin waaweyn oo shirkado ah, iyagoo ku dhiirrigelinaya dhibbanaha inuu gujiyo xiriiriyaha ama soo dejiyo lifaaqyada.
Calammo shaki leh, wuxuu aad ugu fiirsadaa boorarka ay bixiyaan dalacsiin shaki leh, waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco cudurka.
Si looga fogaado inaad ahaato dhibbane fayraska noocan ah, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso qodobka soo socda: Sidee loo aqoonsadaa fayraska Phishing?
Sideen u masaxaa Keylogger?
Keyloggers-ka ka fudud, rakibay iyo API-ga ah ayaa si fudud u fudud in laga saaro. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kuwa kale oo loo rakibay barnaamij sharci ah, markaa markaad isticmaaleyso antivirus ama a antimalware maya se waxay maareeyaan inay soo ogaadaan oo iyagu gabi ahaanba lama oga, mararka qaarkood xitaa waxay u ekaadaan darawalada nidaamka qalliinka.
Sidaas darteed haddii aad ka shakisan tahay in uu ku daawanayo Keylogger, waxaa fiican inaad hesho a dawada dawada, waxaa jira kuwo aan dhammaad lahayn; Haddii ay dhacdo in tani aysan adiga kuu shaqeyneynin, waad ka raadin kartaa adiga oo isticmaalaya Maamulaha hawsha Windows. Waa inaad si taxaddar leh dib ugu eegtaa hababka firfircoon ee kombuyuutarkaagu ka kooban yahay illaa aad ka hesho waxyaabo qalaad oo aadan aqoonsanayn.
kaydinta keylogger sida loo sameeyo keylogger qalab keylogger taariikhda keylogger ku tallaal keylogger keyloger keyloger waa maxay keylogger keylogger ee gmail keylogger waa maxay jaridda keystroke Maxaa keyloger loogu talagalay? waa maxay keylogger waa maxay keylogger keylogger spyware isticmaal keylogger
Awooda Xeerarka Kirchhoff
Bilaabashada ugu badan ee la filayo 2021
Ku qor blogga emayl ahaan
Gali iimaylkaaga si aad ugu biirto boggan oo aad u hesho ogeysiisyada waxyaabaha cusub.
Ku biir 1.062 macaamiisha kale
HACKENG EE BULSHADA WARFAAFINTA:
➡Sidee hackdhagta Instagram
➡Sidee hackdhegta Gmail, aragti iyo hotmail
➡Sidee hackdheg Facebook
➡ Hackereyada sirta ah
➡Sidee hackdhegta Twitter
➡Sida loo basaaso sheekooyinka Instagram
➡Sida loo ogaado haddii aan qabo hackeado boostada
➡Injineernimada bulshada hackdhagta maskaxda
➡Sida loogu abuuro dad been abuur ah AI
➡ Sida loo been abuuro webcam
➡ Sida loo abuuro Keylogger
➡ Waa maxay Xploitz sideese u shaqaysaa?
➡ Aqoonso Phishing
➡ Xakamaynta waalidka